Mora sy mora vidy kokoa ny fivezivezena Trans-Tasman.
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Mora sy mora vidy kokoa ny fivezivezena Trans-Tasman.
Aogositra 17, 2009
Ny fitsidihana ofisialy ataon'ny praiminisitra John Key any Aostralia dia homarihina amin'ny fanambarana ny fepetra hanamorana ny fivezivezena any Tas-Tasman ho mora sy ho mora vidy kokoa.
Dingana lehibe iray mankany amin'ny sisintany iraisana eo amin'ny firenena roa tonta, tanjona iray napetrak'Atoa Key tsy ho ela taorian'ny nandreseny tamin'ny fifidianana farany teo.
Hivoaka ny antsipiriany amin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety Andriamatoa Key satria hiaraka amin'ny praiminisitra Aostraliana Kevin Rudd ny alakamisy ary tsy namoaka na inona na inona mialoha ny governemanta.
Na izany aza, ny gazety Melbourne The Age dia nitatitra fa eo ambanin'ny fitondrana vaovao manidina avy any Aostralia mankany Nouvelle Zélande dia ho sahirana sy mora toy ny dia an-trano ihany.
Nilaza ny gazety fa ny fanambaràna ny alakamisy dia mety hahitana ny fanesorana ny hetra fiaingana, famaranana ny fanaovana kopia, ny fadin-tseranana ary ny fizahana fiarovana ary mamela ny fiaramanidina hidina amin'ny terminal any anatiny.
Ny loharanom-baovaon'ny governemanta New Zealand dia nilaza fa ny fanambaràna dia haneho ny fandrosoana natao hanatsarana ny fivezivezena ary hampiditra tsikelikely ny fanovana.
Ny fanambaràna dia tsy hanondroana fa fitondrana vaovao vonona hapetraka amin'ny ho avy tsy ho ela, hoy ny fahazoan'ny NZPA.
Ny fanovana lehibe indrindra dia ny faneken'ny firenena tsirairay ny fiarovana, ny fifindra-monina ary ny fanaraha-maso ny quarantine, rafitra iray mitovy amin'ny izay miasa eo amin'ireo firenena Vondrona Eropeana.
Ny indostrian'ny fizahantany dia nanohana mafy ny fivezivezena trans-Tasman mora kokoa, izay mety hampisondrotra ny isan'ny mpitsidika amin'ny fomba roa.
Andriamatoa Key, izay mitazona ny fizahantany fizahan-tany koa, dia niara-niasa akaiky tamin'ity sehatra ity mba hitady fomba hampitomboana ny fivezivezena.
Ny fotoana fampidirana ireo fomba vaovao dia miankina amin'ny halavan'ny fotoana fampidirana ireo rafitra, ary na dia tadiavin'Atoa Key aza amin'ny toeran'ny Krismasy dia mety maharitra ela kokoa noho izany.
Hanidina avy any Wellington ho any Melbourne izy amin'ny talata ary handany ny alarobia ao an-tanàna, hanatrika fiasana ary hanao kabary alohan'ny hiaingany ho any Canberra izay hisy ny fandraisana ara-pivavahana ao amin'ny Parliament.
Hanao ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety miaraka amin'i Andriamatoa Rudd ny alakamisy maraina ary hanao kabary ao amin'ny National Press Club ny tolakandro.
Ny zoma dia manidina any Sydney izy noho ny fivorian'ny raharaham-barotra sy ny sakafom-pisakafoanana Australia-New Zealand Leadership Forum.
Andriamatoa Key dia hiatrika ny lalao rugby Cup any Bledisloe amin'ny asabotsy ary manidina mody amin'ny alahady.